Tao anatin’ny fandrahonana fisamborana faobe, nifamory ireo Filipiana mpanohitra nandritra ny kabary momba ny toeran’ny fireneny nataon’i Duterte. · Global Voices teny Malagasy
Tao anatin'ny fandrahonana fisamborana faobe, nifamory ireo Filipiana mpanohitra nandritra ny kabary momba ny toeran'ny fireneny nataon'i Duterte.
Voadika ny 03 Janoary 2021 15:28 GMT
Vakio amin'ny teny Italiano, Ελληνικά, Español, русский, English
(Fanamarihana: lahatsoratra nivoaka tamin'ny Aogositra 2020)
Olona an'arivony maro avy amin'ny vondrona samihafa no tonga nanotrona ny fihetsiketsehana nasionaly nanohitra ny governemanta filipiana tamin'ny fotoana nanaovana ny ‘’kabary momba ny toeran'ny firenena ‘’ (Sona) faha-5 nataon'ny filoha Rodrigo Duterte. Saripikan'i Kodao Productions, mpiara-miasa mpanome votoaty ho an'ny Global Voices, nahazoana alàlana.
Nandritra ny fotoanan’ny lahateny fahadimy (SONA) nataon’ny Filoha Rodrigo Duterte ho an’ny firenena, ny 27 Jolay, na teo aza ny fandrarana ofisialy ny fihetsiketsehana, dia nivory tao amin'ny oniversitem-panjakana voalohany ireo Filipiana mafana fo mba haneho ny fahasosoran'izy ireo amin'ny governemantan'izy ireo.
Tamin’io andro io, no feno mpanao fihetsiketsehana nankahatra ny fandrahonana fisamborana sy ny fametrahana polisy mihoatra ny 6.000 tao amin'ny renivohi-pirenena, ny lalana rehetra mankany amin'ny oniversite Philippines Diliman campus ao an-tanànan'ny Quezon. Tombanana ho 8.000 ny olona nivory tao an-drenivohitra, raha an-jatony kosa no nanatevina laharana ireo hetsi-panoherana lehibe tany amin'ireo tanandehibe hafa manerana ny firenena.
Ny toeram-pivoriana lehibe dia ny toeram-ponenan'ireo mpianatra tao amin'ny UP Diliman, toerana manokana noho ilay fifanarahana vita azon'ny hetsi-panoherana nanohitra ny fitondrana jadona Marcos tamin'ny taona 1980 mandrara ny polisy sy ny miaramila tsy hanitsaka ao amin’io toerana io. Izany dia nahatonga ny oniversite ho iray amin'ireo toerana vitsy sisa tavela izay mbola azon'ny olona ampiharana ny zony hivory. Na izany aza, ny 27 jolay, natsangana teo am-bavahadiny ny tobin'ny polisy, saingy tsy nahasakana ny olona tsy hiangona izany.
Niara-nivory ny mpanao fihetsiketsehana hanameloka ny valin-kafatra mihisatra, tsy mahomby ary ampiasàna tafika ataon'ny governemanta Duterte amin'ny fandraisany an-tànana ny areti-mandringana COVID-19. Nomelohin'ireo mpikatroka mafàna fo koa ny fanamafisana ny famoretan'ny fanjakana, voamariky ny fandaniana, tsy ela akory izay, ilay lalàna manohitra ny fampihorohoroana, izay atahorana be ho toy ny famantarana iray ny famoretana bebe kokoa an'ireo mpitsikera ny governemanta. Ny isan'ny tranga COVID-19 voamarina tao Filipina dia tafakatra hatramin'ny 93.000 tamin'ny faran'ny volana Jolay, saingy tohizan'ny governemantan'i Duterte hatrany ny mandà ny fitsikerana rehetra ny ezaka nataony, ary itrikitrihan'izy ireo fa mbola voafehy ny zavatra rehetra.
Ireto misy sary marobe avy amin'ilay fihetsiketsehana:
“Miadia ho an'ny asa, ny karama ary ny zo.” hoy ny sorabaventy eo ankavia. Saripikan'i Kodao Productions, mpiara-miasa mpanome votoaty ho an'ny Global Voices, sary nahazoana alàlana.
Ny kodiarana mihodina manasongadina ny teny ”pahirap” (enta-mavesatra), ”traydor” (mpamadika), ”korap” (mpanao kolikoly) ary ”pasista” (fasista) hilazana ny governemanta Duterte. Saripikan'i Kodao Productions, mpiara-miasa mpanome votoaty ho an'ny Global Voices, sary nahazoana alàlana.
Ireo mpitarika ny vondron'ny fahasalamana tao amin'ny #SONAgKAISA pic.twitter.com/jXCwvSDpwC
— MENCH (@menchongdeee) 27 Jolay, 2020
Vao haingana ny kaomisionan'ny Firenena Mikambana misahana ny zon'olombelona no nisintona ny lakolosy fanairana amin'ny fitomboan'ny tranganà fanamarihana mena, ny fanorisorenana, ny fisamborana ary famonoana ireo mafana fo endrikendrehana ho “Kaominista-mpampihorohoro” tao amin'ny firenena. Tsy nijanona io politika io na teo aza ny fisian'ilay areti-mandringana: nanamafy ny ezaka nataony ny governemanta Duterte hanakatona ireo tranonkalam-baovao tsy miankina, toy ny Rappler, ary manohy ny fanelingelenany ireo media hafa madinika kokoa. Ny Kongresy Filipiana, izay anjakan'ny mpiara-dia amin'i Duterte, tamin'ny 10 Jolay, dia nandà ny fahazoandàlana hiasa ho an'ny ABS-CBN, mpandefa fahitalavitra sy radio lehibe indrindra ao amin'ny firenena. Notafihin'ny polisy ihany koa ny biraon'ny ONG Kadamy, izay miady amin'ny fahantrana an-tanàndehibe, nisambotra ireo mpikambana tao aminy ary naka an-keriny ireo dika tamin'ny gazetibokim-baovao Pinoy Weekly, izay nantsoina hoe “antontan-taratasy manakorontana”.
Namoaka didy mandrara ny hetsipanoherana ny Departemantan'ny atitany sy ny governemanta eo an-toerana izay tarihan'ny sekreterany, ny jeneraly teo aloha Eduardo Año, tamin’ny andro nikabarian’ny Filoha.
Kanefa niroso hatrany ireo mpanao fihetsiketsehana ary araka ny hita eto amin'ireto sary manaraka ireto, dia nanao maska izy ireo ary tena nanaja ny fitsipiky ny elanelana tokony ho hajaina mba hiantohana ny fiarovana ny tenan'izy ireo.
Nantsoina hoe SONA-n'ny vahoaka miray, ny #SONAgkaisa no lohahevitra nasongadin'ilay hetsi-bahoaka. Ny tenifototra dia manambatra ny teny hoe SONA sy ”nagkaisa” (miray) hanasongadinana ny fiarahan'ireo hery politika sy ireo fironana isan-karazany. Saripikan'i Kodao Productions, mpiara-miasa mpanome votoaty ho an'ny Global Voices, nahazoana alàlana.
Sarin'ny fihetsiketsehana tamin'ny 27 Jolay, an'i Kodao Productions, mpiara-miasa mpanome votoaty ho an'ny Global Voices, nahazoana alàlana.
Haingam-pandeha tokoa ireo pelaka miaraka amin'ny fiantraikan'ny #folklore 😌 Satria inona i Taylor Alison Swift ? Mpanohitra ny fasista! #SONAgKAISA pic.twitter.com/9ooOFdGUXz
— Philip Jamilla (@pmjamilla) 27 Jolay, 2020
Iray tamin'ireo zava-nisongadina tamin'izany ny fihirana ilay “Do You Hear the People Sing” (Renao ve ny vahoaka mihira) avy amin'ilay fanehoana an-tsehatra ny Les Misérables, an'i Victor Hugo, saingy rindra filipiàna no nilalaovana azy :“Di Niyo Ba Naririnig?”:
Nandritra ny andron'ny fihetsiketsehana, namoahan'i Debold Sinas, lehiben'ny polisy ao amin'ny Metro Manilla didy ny hisamborana ireo olona hita mitondra sora-baventy sy takelaka fanoherana. Nahatratra 141 ny olona voasambotra nanerana ny firenena noho ny fandraisany anjara tamin'ny fihetsiketsehana. Anisan'izany, vehivavy mahantra efatra avy any Pandi (Bulacan) nogadraina noho ny fandraisany anjara tamin'ny fihetsiketsehana an-tserasera. Olona 64 teo ho eo ihany koa no voasambotra teny an-dàlany handeha ho any amin'ny hetsi-panoherana SONA any amin'ny faritanin'i Cavite, atsimon'i Metro Manila:
Photos of Cavite 64 from Bagong Alyansang Makabayan Cavite#SONAgKAISA#FreeCavite64 pic.twitter.com/XW24fB4QvI — UPLB Perspective (@uplbperspective) July 27, 2020
JEREO: Mbola notazonina tsy misy antony mazava ao amina kianja notafoina ao anilan'ny tobin'ny pôlisy ao Carmona, Brgy ireo ‘’Cavite 64’’. Maduya, Carmona, Cavite.
Sarin'ny ”Cavite 64” any Bagong Alyansang Makabayan Cavite # SONAgKAISA # FreeCavite64 pic.twitter.com/XW24fB4QvI — UPLB Perspective (@uplbperspective)27 Jolay, 2020
Navoaka izy ireo taorian'izay noho ny tsy fisian'ny vesatra fanenjehana.